देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको यस्तो लिष्ट तयार ! (नामावलीसहित) - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित)6मिनेट अघि
नेप्लिज संवाददाता १२ आश्विन २०७८, मंगलवार २१:०४ (3 हप्ता अघि) १६५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी तिव्र रुपमा गरिहेको छन् । उनको यो तयारीको सारथी सत्ता गठबन्धका दलका शिर्ष नेताहरु रहेका छन् ।
अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरु क–कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनेर तयारी गरिरहेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेका हुन् ।
तर, अहिलेसम्म दलहरुले मोटामोटी आफ्नो दलबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेको नाम तयारी गरिसकेको छ । अहिले शिर्ष नेताहरुले सट लिष्टमा राखेर उनीहरुको नाम फाइनल गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेसले ५ जना मन्त्री बनाइसकेको छ । अब नयाँ ३ जना थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको नाम फाइनल भएको छ । अर्का एक जनामा भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीमध्ये मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकोमा २ जना मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । अब ४ जना पठाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि हरिबोल गजुरेल, महेश्वार गहतराज, शशि श्रेष्ठ, सुरेस राई,अन्जना विशंखे, हरि अधिकारीमध्येबाट ४ जना पठाउने तयारी गरेको छ ।
जसपाले भने अहिलेसम्म क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाइ सकेको छैन । तर, राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ ।
तर, गठबन्धन दलहरुबीच कुन–कुन मन्त्रालय क–कसले लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । शुक्रबारभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी रहेको छ ।